Iko Kushungurudzika kwekushambadzira kune iyo Sosaiti Sangano | Martech Zone
Chishanu, July 17, 2015 China, November 5, 2015 Douglas Karr
Kushanda nemakambani ekushambadzira tekinoroji kunotipa isu mukana wekushanda nemasangano akati wandei - kubva kumakambani makuru anoona mufananidzo wakakura kwazvo uye vari kushanda kugadzirisa iwo maratidziro echiratidzo chavo pamusoro pemakore - kusangano riri kushamisika kuti nei foni yavo isiri kuridza mwedzi mukudyara kwavo.
Kufananidza kwandakashandisa kwenguva yakati rebei nekutengesa kuredza. Kana iwe uri sangano rinotengeswa nekutengesa, iwe unongoda kubuda pamusoro pemvura uye kukanda chirauro chako. Iyo yakawanda tsvimbo yauinayo uye nekukasira iwe kwaunogona kuzviisa zvese mumvura, inowedzera mikana yekuti chimwe chinhu chingarume. Dambudziko nderekuti hove dzinogona kunge dzisipo pane igwa rako, rinogona kusada chirauro chauri kushandisa, uye sechibereko sezvauri - unogona kudzoka kumba usina chinhu.
Kushambadzira inzira yekuyedza, kukanganisa, uye kukurumidza. Basa remushambadzi nderekudzidza kuti hove dzinogona kunge dziri kupi, uye chii chakanakisa chirauro, uyezve kudzamisa mvura yekuunza hove hombe kana vasipo. Maitiro aya anogona kunetsa kunetsa kune kambani inongotenda kuti nzira dzekuwana zvimwe kutengesa ingori yekufona.
Kuti ndive akajeka, ini handisi kugogodza kutengesa kugadzirwa uye kutengesa kugoneswa. Kuva nemunhu mukuru wekutengesa kunze kwekuredza kwemvura panguva yakakodzera, nemidziyo chaiyo, mumvura chaiyo, nechirauro chakakodzera… ndiyo mamiriro akakwana. Kungoti kusvika ikoko kunotora nguva.
Kana iwe uri muredzi wehove uye ukashanyira kumwe kwausati wambobata hove zvisati zvaitika, chinhu chekutanga chaunoita kutsvaga mutungamiri uyo anazvo. Kunyangwe mubati wehove akanyanya anoziva kuti, kana vachida kubudirira, kutsvaga gwara chairo kunovapa mukana wakanakisa wekumisa hove dzavanoteedzera. Vakuru vekutengesa vanhu vanoziva izvi futi. Vakuru vekutengesa vanhu vanofarira kushanda nevatengesi kuti vazive kuti chirauro chirikushanda chii, chii chisiri, uye kana hove huru dzichiruma.
Kushambadzira ichi chinhu chinoshamisa kune rinotengeswa rinotyairwa sangano risina kumbozviita kare. Ivo vanoziva kana ichinge isipo, asi havagone kufunga nzira yekuyera iyo mari nekuti haina kukodzera nyore muspredishiti sekufona uye kuvhara kunoita. Kunyangwe isu tichiedza zvechokwadi kudzivisa kushanda nemasangano anotengeswa, pavanotimanikidza kuenda, zvakakosha kuti isu tipe kukurukurirana kukuru uye nekuzivisa nezviratidzo zvinotungamira zvavanokwanisa kubatanidza madota nazvo.
Mugove wezwi - yakawanda yenguva iyo masangano anotyairwa-kutengesa anoziva kuti ivo vanoda kushambadza ndipo apo vateereri vanogara vachitaura nezveavo vanokwikwidza uye panongova pasina zvakawanda zvekutaura nezve yavo yega brand, zvigadzirwa kana masevhisi. Kushandisa chishandiso chekutarisa chemataurirwo nekuzivisa kwakanaka kunogona kupa mishumo inoratidza vhoriyamu nyowani ye ruzha nezvekambani yako maringe nevakwikwidzi vako. Izvo zvakare zvichaisa vhoriyamu mumaonero uye kuratidza kuti ndeipi nhanho yenhanho iri kuendeswa nevako vaunokwikwidza vaunofanirwa kurwisa.
Kutsigira Kutengesa Zvinhu - isu tanga tichishanda nesangano rinotengeswa nekutengesa uko isu tashanda pakumira kwavo kutanga, tobva tagadzira zvimwe zvakashongedzwa zvinhu zvezvikwata zvavo zvekutengesa. Dambudziko raive rekuti havana kusanganisira nhengo dzechikwata chaidzo munhaurirano… saka mwedzi yakati gare gare takasaina demo uye takazviwana tichiona simba remutengesi raishandiswa basa redu risati rasvika. Iyo mhando yakanga isiri kunyatso kumisikidzwa, iwo maficha uye mafonti zvakaita kuti zvioneke seprojekiti yechikoro chepamusoro, uye kutengesa kwakaramba kuchiderera. Kunze kwekunge timu yako yekutengesa yatenga mukati, yakadzidziswa mukumira kwako, uye irikushandisa zvinhu zvako zvekushambadzira mukutengesa… kushambadzira kwako kushambadza kunopesana nezano rako rekutengesa.
Zvikamu uye chinzvimbo - ndiwo maonero angu ekuti maGoogle algorithms ndiwo akaomesesa pasirese kuisa chinzvimbo chine chiremera nemusoro wenyaya unotsvaga mushandisi. Chinzvimbo chinoda kuenderera mberi nechisimba kwezvazvino, kazhinji uye zvinehunhu zvemukati zvakagovaniswa online. Kana usiri kuburitsa zvemukati zvemukati, hazvisi kuzogovaniswa. Kana isiri kugoverwa, haisi kuverengwa.
Mushanyi maitiro - kana isu tikashanda nemasangano anotengesa-anotengesa, yedu yemukati yekugadzira uye tarisiro inowanzo shanduka kubva kupfuti pfuti kuenda kune yakatarwa boka. Izvi zvinoreva kuti iro chairo vhoriyamu revashanyi rinogona kuderedzwa pane saiti, asi akakodzera vashanyi anowedzera. Tichatarisa iwo mapeji pakushanya, chiyero chekubuda mukati nekubuda kwemapeji ekumhara, uye kangani kunyoreswa uye kunyoreswa kuri kuitika.
Prospect Demographics uye Firmographics - Kushambadzira kuri kuchinja huwandu hwevanhu (B2C) kana iyo solidographics (B2B) yevatungamiriri iyo kushambadzira kwako kuri kukwezva? Zviri kuchinja nekufamba kwenguva here? Kana timu yako yekutengesa iine mutengi akakodzera, iwe unofanirwa kukwanisa kuyera kuti izvo zvinotungamira zvauri kutora zviri kutarisa padyo padyo nekwedhi kune akakodzera mutengi wavari kutsvaga.
Kutengesa Attribution - Regedza kushandisa icho chekupedzisira chinongedzo pakutengesa uye wotanga kuratidza kuti ndeapi mashambadziro ekushambadza abata tarisiro yega yega. Kugona kuongorora infographic yavakauya nayo, kana peji ravakawana mukutsvaga, kana whipepaper yavakadhawunirodha, kana kunyoreswa kwavakapindura kunokubatsira kuti unzwisise kuti kushambadzira kwako kwakakanganisa sei kutengesa. Boka rakakura rekutengesa uye foni ichavhara bhizinesi rakawanda, asi timu hombe yekutengesa inodaidzira tarisiro yakadzidziswa uye inokurudzirwa neako marongero ekushambadza anozovhara zvirinani.
Kutaurirana izvi zvinotungamira zviratidzo zvinobudirira zvinobatsira kuisa iyo inotyairwa-inotungamirwa sangano iri nyore. Vachiri kuzogumbuka kuti foni yavo haisi kurira kubva kushambadziro iyi mumbo-jumbo yauri kuita… zvirinani ivo vanozoona kukurumidza kwauri kugadzira. Uye kushandisa maratidziro emutsara wezvaunotarisira mune ramangwana zvinofanirwa kuvaita vane tarisiro yekuti - kwete chete kuti kushambadzira kunobatsira vanhu vavo vekutengesa kuvhara zvimwe zvibvumirano - vanozoziva kuti zvakavabatsira kuvhara madhiri akawanda uye madhiri makuru nekushomeka kushoma.
Kushambadzira kunoshanda kwenguva yakareba mushure mekudyara. Tichine mapepa akachengeterwa vatengi makore mana apfuura ayo anoramba achityaira kutengesa kune mazhinji emasangano. Izvi zvakakosha kuyeuka. Kana iwe ukamira kubhadhara wako anomiririra wekutengesa mangwana, foni inomira kurira. Kana iwe ukamira kuisa mari mukushambadzira, uchaenderera mberi nekukohwa iwo mabhenefiti kunyangwe iwo achizoderera nekufamba kwenguva. Mari yako yekudyara iri mune zvese - uye nguva dzose kushandisa zvinowirirana zvekushambadzira nzira dzekukura uye kuramba uchidzikisa mutengo wako pakutenga, mutengo paupsell, kuwedzera kuchengetedza, kuwedzera izwi remuromo, uye kukura kutengesa.
Tags: basazvinotungamira zviratidzochepamusorokutengesa kunotungamirwa sanganozvinhu zvekutengesakutengesa maringe nekutengesamugove wezwimagarirokutsigira kutengesa